Huawei CEO na -ekwu maka ọdịnihu ụlọ ọrụ ahụ Androidsis
Huawei CEO na-ekwu maka ọdịnihu nke Leica na ekwentị ya na Daydream maka afọ a
Huawei na -emezu atụmanya enyere maka afọ a, ọ bụ ya na -akwadebe akụkụ nke ọdịnihu gị na ụfọdụ njiri mara mma ngwa mkpanaka gị ga -enwe ọtụtụ afọ na -abịa. N'ịbụ onye nrụpụta ekwentị nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa, ọ bụ nrụgide agbakwunyere maka ụlọ ọrụ chọrọ ịnọgide na -eto eto ma n'otu oge n'ọdịniihu ebili n'ọkwa nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ Samsung na Apple nwere.
N'ajụjụ ọnụ a gbara akwụkwọ akụkọ Wall Street Journal, Richar Yu, onye isi ụlọ ọrụ Huawei, kwuru na onye nrụpụta ga -ebuputa ngwa VR njikere ekwentị ma ọ bụ eziokwu mebere ọdịda a. Nke a ga -agbakwunye na ọkọlọtọ Daydream nke Google nke a ga -etinye na gam akporo N. Yu na -ekwukwa maka ọdịnihu nke na -echere ụlọ ọrụ nwere nkwekọrịta ya na Leica, nkwekọrịta ahụ nke jisiri ike bulie ọtụtụ atụmanya maka ohere enwere na foto maka Huawei.
Yu kwuru n'ihe metụtara Leica, na ọrụ njikọ a ga -aga n'ihu otu a n'afọ ise ọzọ, yabụ anyị na -atụ anya na anyị ga -ahụ mmekorita chiri anya site n'aka onye nrụpụta ngwa anya German karịa nke a hụrụ na Huawei P9, nke na -emeghị nnukwu mgbanwe na ihe a hụrụ n'afọ ndị gara aga.
Yu na -akọrọ ihe mgbaru ọsọ na oge maka Huawei na ụlọ ọrụ ama:
"Anyị chọrọ bụrụ onye nrụpụta nọmba nke mbụ na ọtụtụ smartphones na -ere n'ụwa. Ọ bụ ọsọ dị anya ma anyị nwere ndidi maka ya. Uto anyị na -abịa tumadi site n'ọkwa dị elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye na-ere ahịa na-eduga, ị ga-abụrịrị onye na-eduga ọkwa dị elu ”.
Mgbe Huawei nọ ịchọta nnukwu ahịa ya na EuropeNa Middle East na India, onye nrụpụta enweghị nnukwu ọnụnọ na United States. Yu kwuru na Huawei na ndị na -arụ ọrụ na -akparịta ụka iji weta ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu na mba ahụ, mana ekwughi ihe ọ bụla akọwapụtara maka ngwaahịa ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei CEO na-ekwu maka ọdịnihu nke Leica na ekwentị ya na Daydream maka afọ a
Samsung kwupụtara Gear Fit 2 wearable na Gear Icon X ekweisi
Facebook nledo anyị site na igwe okwu nke ekwentị anyị